नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै ध्वस्त भईसक्योः डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी - Dainik Online Dainik Online
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै ध्वस्त भईसक्योः डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी
गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याब्स भएको भन्दै स्वास्थ्य नीति परिर्वतन गर्न सुझाव दिनुभएको छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले मंगलबार जिल्ला भित्र भएका डेडिकेटेड कोविड अस्पतालका प्रमुख संग गरेको छलफलमा डाक्टर अधिकारीले “हेल्थ सिस्टम नै कोल्याब्स” भएको दाबी गर्नुभएको हो ।
सरकारले कोभिड उपचारका लागि तोकेका अस्पतालले संक्रमितको उपचारको जिम्मा लिन नसकेको, अस्पतालमा बेड संख्या बढाउने कार्य भाषणमा मात्रै सिमित भएको र जिम्मेबार निकायले दायित्व पुरा गर्न नसकेका कारण कोभिड संक्रमित लगायत समग्र स्वास्थ्य उपचारको स्थिति जटिल बन्दै गएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो “हाम्रो हेल्थ सिस्टम कोल्याब्स भईसकेको छ । यसको उदाहरण मेरो अस्पतालको दिन्छु । हामीलाई नेपाल सरकारले तिमी मुटुको विरामी हेरिदेउ र मुटुका विरामीलाई यदि कोभिड लाग्यो भने त्यसको जिम्मा लेउ । म अहिले पनि लिन सक्छु । तर अर्को हस्पिटलले कोभिड मात्रै भएका विरामीलाई जिम्मा लिईदिओस् ? तर कसैले पनि जिम्मा लिन सक्क्तैन अहिले । किनभने हाम्रो सिस्टम कोल्याप्स भईसकेको छ । हामीले जति बेड बनाउनुपर्ने त्यो बेड बनाउन सक्ने अवस्थामा नै छैनौ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको पहिलो वेभ आएको बेलामा नै सम्पुर्ण सरकारी अस्पतालका निर्देशकलाई बोलाएर कति बेड व्यवस्थापन गर्न सक्छौ भनेर भन्नुपथ्र्यो । बेड व्यवस्थापन गर्ने कुरा एक दिनको कुरा होइन । म दुखका साथ भन्छु । विर अस्पतालको ५ सय सैयाको छ तर संञ्चालन गर्न नसक्नु अहिलेसम्म भनेको लाजमर्नुको अवस्था हो । हामी के हेरेर बसिरहेका छौ ? हाम्रा विरामी इमर्रजेन्सी बाहिर बसिरहेका छन् । ५ सय सैयाको वीर अस्पताल टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने । यसको जिम्मा कस्ले लिने ?यो मिटिङ १ बर्ष अगाडि सुरु गर्नु पथ्र्यो । ”
काठमाडौं उपत्यकामा फेरि १ हप्ता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी